Yedikuyular Ski Center na-akwado maka oge - RayHaber
HomeGeneralYedikuyular Ski Center Na-akwadebe maka Oge
ebe a na-akwadebe maka oge ahụ
Mịnịsta Güngör kwuru na nkwadebe maka oge a na-aga n'ihu na Yedikuyular Ski Center ma gbakwunye: yerine Anyị na-arụ ụlọ ahịa ọhụrụ nke ga-enye ndị ọbịa anyị ọrụ dị mma kama ịhapụ usoro iri nri na ị drinkingụ ihe ọ inụ drinkingụ na mpaghara. Facilitieslọ ọrụ ọhụrụ ahụ ga-akwalite ma ree ngwaahịa obodo anyị. Jisie ike. ”
Onye isi obodo nke obodo Kahramanmaraş Hayrettin Güngör, TRT Çukurova Redio Yedikuyular Ski Center kwuru nkwupụta gbasara mgbasa ozi na-ebi ndụ. N'ikwu na ihe owuwu a dị ezigbo mkpa maka mpaghara a, Güngör kwuru, “Ihe owuwu anyị dị ihe dị ka kilomita 15 site na etiti obodo. Fellowmụ amaala obodo anyị na ndị ọbịa si n’obodo na-erute rute ebe anyị na-aga sọọsọ 10 site na etiti. N'afọ gara aga, anyị nabatara ọtụtụ puku ndị ọbịa 800 n'ụlọ ọrụ anyị. Ebumnuche anyị ịmụbawanye ọnụ ọgụgụ a. ”
Mayor Güngör kwuru, "Ezubere Yedikuyular Ski Center na mpaghara narị mita square 1,5. Agbakwunyere runways na akụrụngwa so n'ọrụ ahụ. Anyị na-arụ ọrụ na nke a. Ndị ọbịa anyị sitere n’obodo ndị dị nso dịka Gaziantep, Adiyaman, Sanliurfa, Hatay, Adana, Osmaniye na Mersin na-egosi nnukwu mmasị na mpaghara sket anyị. Anyị amalitela nkwadebe dị mkpa maka oge ọhụrụ iji gboo mmasị a. ”
Tokpọ oku na Ski Resort
Mayr Hayrettin Güngör, onye isi obodo nke ndị isi obodo Metropolitan, kwuru na mpaghara ebe ebe iri nri na ihe ọ drinkingụ drinkingụ na-akpata mmetọ ihe oyiyi ga-ama mma, kwuru, sị: Anyị na-arụ ụlọ ọhụụ nke ndị ọbịa nọ na mpaghara a iji gboo mkpa ha na gburugburu ebe dị mma ma a ga-ere ngwaahịa obodo anyị. Ndị otu anyị na-arụ ọrụ ọsọsọ. Enwere m olileanya na ọrụ anyị ga-abụ ọrụ n’oge ọhụrụ. Ọ ga-amasị m ịkpọ ndị obodo ibe anyị na obodo ndị agbata obi anyị ka anyị bịa na Yedikuyular Ski Center n’oge ọhụrụ ”.
Yedikuyular Ski Center Na-akwadebe maka Oge 20 / 09 / 2017 Kahramanmaras Metropolitan Municipality Yedikuyu oche-abọli Ski Center ụlọ, dị ka na-abọli eriri mgbe ẹkụre track edezi arụmọrụ kụrụ masts nke n'ibu usoro na traction na-aga n'ihu na-arụ ọrụ na usoro. Ejirila egwu nile nke okporo ụzọ ndị ahụ, ọfụma ha adịtụghị. Ụlọ ọrụ nchịkwa 1844 na 2055, ụlọ ahịa, ụlọ ọrụ ọha na eze dị ka na-aga n'ihu. Na 3 1840 mpempe soro na-aghọ Yedikuyular mita elu Ski Center ebe ya na-ewu a na-eme ebe a ga-a skai inwego na skai inwego akara osisi akara 8 10 posta 760 mita n'ogologo, ya na ndị isi ojii. A ga-enwe egwu atọ. Teleski runway maka ndị na-amalite na 8 ọchịchọ Tel
Yedikuyular Ski Center Na-akwadebe maka Oge 24 / 10 / 2017 Yedikuyu na-amalite na-ewu site Municipality of Kahramanmaras amụrụ Ski Center na-aga n'ihu na zuru ọsọ. Kahramanmaras Metropolitan Municipality Studies na Projects Department of Studies na Projects Directorate-aga n'ihu na-ewu nke Yedikuyu na-achịkwa Ski 1800-xnumx'l e karị eriri internet na-ajụ voltaji ọkụ transformer e dechara. ndutịm na management center ụlọ ke 2000 elu, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, snowtruck (snow ndinuak igwe) vs ụlọ, ndị na-ewu ụlọ oriri na ọṅụṅụ ụlọ ke 1844 elu-aga n'ihu na ngwa ngwa. Ejirila ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ 2055. A na-akwado usoro usoro. A ga-amalite ụdọ n'oge na-adịghị anya. 6 puku mmadụ DAILY ikike Kahramanmaras Metropolitan Municipality ...
Ogige Palandoken na-akwadebe maka oge ahụ 19 / 11 / 2013 Palandöken skai eme na-akwadebe maka oge: Odude n'etiti isi skai ntụrụndụ nke toki Palandöken Ski Center na-akwadebe maka oyi na-abịanụ oge. Maka oge ọhụrụ, Xenadu Snow White Hotel, na Palandöken Mountain, na-agafe na pine osisi ma na-agba ọsọ 3 ọhụrụ ski maka ski ski. A ga-emeghe oge ezumike n'izu mbụ nke Disemba na usoro snow snow na Palandöken, bụ ebe a na-etinye ego 4 nde euro na ọrụ ọkụ ọkụ. Na 2011 na Turkey meghere afọ abụọ nke 'Best Sports Hotel' Xanadu Hotel Snow White kwuru na ha natara award maka Nlekọta Affairs Manager Omar Akca, "ikpeazụ ...
Ugwu Ski Ergan Mountain Ski bụ Na-akwadebe maka Oge 11 / 08 / 2014 Erkan Mountain Ski Resort Season ngwa ngwa na-akwadebe Erzincan Governor Abdurrahman Akdemir, Erkan Mountain Ski Center na-aga n'ihu na-ewu nke na-enyocha n'elu ugbu a ala nke skai oge nkwadebe ndị ọzọ ụlọ ọrụ na-enweta ozi site na isi kwuru na Erkan Mountain Ski Resort. Deputy Gọvanọ Robert Rock na yiri òtù gakwara ọchịchị nke nchoputa na-eje ije na ìgwè ndị agha, ebe zubere snowpark, 2. ụbọchị nke ịdị n'otu osisi ewu na landscaping dị na review amụrụ Governor Abdurrahman Akdemir, na-egosi osooso nke ịrụ ọrụ na okpomọkụ oge na okwu nke ẹkụre na a ga-atụle mma, ngwa ngwa dechara maka cultivation oge nke zubere ọrụ ...
Cıbıltepe Ski Center na-akwadebe maka oge 02 / 10 / 2014 Cibiltepe Ski Center na-akwadebe maka oge: Turkey si Sarikamish Cibiltepe Ski Center bụ otu n'ime ihe ndị kasị mkpa njem emmepe nke oyi, oyi oge n'ụzọ n'ibu na osisi preparations anọgide Iweputa. Pine ọhịa n'agbata ogologo skai mkpọda na Cibiltepe nke bụ otu n'ime ndị kacha amasị skai emmepe na oge a na akwadebeghị skai lifts, Ski na mkpọda tupu oge mgbe nhicha na leveling ọrụ, na aka nke ọzọ mere echichi nke anọ oche inwego na-aga n'ime a oyi ọrụ. Sarıkamış Governor Muhammad siri ike, AA kwuru na nkwupụta ka akuko, na mkpọda nke a skai oge iji nye mma ozi kayaksever na mere oké ọhụrụ n'ibu osisi ...
Ugwu Ski Ergan Mountain Ski bụ Na-akwadebe maka Oge
Cıbıltepe Ski Center na-akwadebe maka oge
Cıbıltepe Ski Center na-akwadebe maka oge ọhụrụ
Karacadağ Ụlọ Nzukọ Center Na-akwadebe maka Oge
Ozi ọma si Mayor Erkoç! .. Yedikuyular Ski Center ga-enweta oge